Archive du 20171030
Korontana tany Toamasina Noravan’andian’olona ny barazin’ny pesta
Noheverina fa nifarana ilay tsaho niniana naely tao Toamasina nampisahotaka fianakaviana maro niaro an-janany tamin’ilay resaka vaksiny amin’ny pesta mampalemy.
Andry Rajoelina Tandindomin-doza ny hoavy politikany
Totoafo ny serasera ataon’ireo mpomba ny fitondrana HVM nanomboka ny faran’ny herinandro teo nanambara fa ny fitondrana tetezamita no nivarotra ny tany misy ny villa Elisabeth toeram-ponenan’ny fianakaviana Zafy Albert eny Ivandry.
Fahombiazan’ny filoham-pirenena iray Miankina amin’ny fahendren’ny vadiny
Nampametra-panontaniana ireo mpanara-baovao ihany ny nahita ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, matetika mandeha irery tao ho ao,
Depiote Ramandimbisoa Félix “Raha sahy dia avelao hirotsaka daholo”
Miomana ary vonona hiatrika ny taona 2018. Io no lohahevitra lehibe nanatanterahan'ny Distim boriborintany faha-4 ny fitsangantsanganana nataon'izy ireo ny sabotsy teo teny amin’ny Saha Katsaoka PK 22.
Vaky vava i Rivo Rakotovao Nilamina ny firenena tamin’ny fitondran-dRavalo
Simba tao anatin’ny tetezamita ny firenena, ka izay no ezahina harenina satria nanomboka tamin’ny taona 2008,
Hanao fanambarana, amintsika Malagasy Amin’ny herinandro ho avy izao, ny solontenan’ny parasy. Tsy handripaka intsony, hono, fa ampy izay faty izay Ka hiverina hianatra ireo tanora, lova rahatrizay.
Tsy vita intsony ny “Village de la Francophonie” Nakepoky ny fitondrana ny volabe ?
Herintaona latsaka kely izao no nandraisan’i Madagasikara ny Fivoriamben’ny tany miteny amin’ny ampahany na manontolo ny teny Frantsay na ny “Sommet de la Francophonie” natao ny 22-29 novambra 2016.
Mpanara-dia ny Pr Zafy Albert Raikitra sahady ny rombo ?
Miteraka resabe ankehitriny ny raharaha famarotana ny tany misy ny “Villa Elisabeth” nonenan’ny Pr Zafy Albert sy ny fianakaviany.
Manandafy sy Rakotondrazafy mivady Mitohy ny gidragidra
Mitohy ny fifanitsohana eo amin’ilay mpandinika politika, Mahery Lanto Manandafy sy ny tompon’andraikitra voalohany eo anivon’ny haino aman-jery Free fm, Lalatiana Rakotondrazafy sy ny vadiny Andry Andriatomanga.
Roa taona sazy mihantona ho an-dRaleva Endrika fanapenam-bava, hoy ny firaisamonim-pirenena
Manoloana ny fanasazian’ny Tribonalin’i Mananjary roa taona an-tranomaizina, sazy mihantona, an’Atoa Raleva, mpiaro ny tontolo iainana, tamin’ny 26 oktobra 2017 teo,
4X4 nandona kamiao tao Antsena Namono mpizahatany iray
Fiara 4X4 iray avy any Fianarantsoa no nodomin’ny kamiao avy any Toliara teo amin’ny lalam-pirenena faha-3, PK 468-200, fokontanin’Andalamahitsy, ao amin’ny kaominina Ambanivohitr Antsena, distrikan’Ankazondandy ny sabotsy teo, tokony ho tamin’ny 5 ora sy sasany hariva.
Fetin’ny maty ao Toamasina Nikarakara famokarana faobe ny ekipan’ny TIM Morarano
Saika isan-taona tao anatin’ny valo taona izay dia manomana hetsika ho fanampiana ireo zanaka Atsimo Atsinanana manana havana milevina tsy tonga an-tanindrazana ao Toamasina ny ekipan’ny Tiako I Madagasikara (TIM) ao Morarano tarihan-dRtoa Razanarazo Yvonne Arlette mpanolotsain’ny kaominina. Andiany faha-8 no nataon’izy ireo tamin’ity,
Radio Vaovao Mahasoa Hanamafy hatrany ny fitoriana ny filazantsara
Hanamafy ny fitoriana ny filazantsara hiantsorohany ny Radio Vaovao Mahasoa naorin’ny mpanompovavin’Andriamanitra Marthe Hervée.
Baolina kitra sokajy U 17 Tompondaka eran-tany 2017 i Angletera
Voahosotra ho tompondaka eran-tany eo amin’ny taranja baolina kitra sokajy U 17 voalohany teo amin’ny tantarany ny Rojita Anglisy rehefa nandavo 5-2 ny ekipam-pirenena U 17 Espaniola ny sabotsy 28 oktobra teo tany Calcutta any Inde.
FITEAM Niarahaba ireo mpikambana nisondro-boninahitra
Noho ireo fahaoriana nifanesisesy nianjady teo anivon’ny fikambanana dia nanapa-kevitra ny FITAM na FIkambanan’ny TErak’Androy eto Madagasikara tarihan’ny loholon’i Madagasikara, Rehosevo,
Mifampiandry kendritohana !
Hatraiza no hiafaran’ity raharaha famarotana ny toerana misy ny trano fonenan’ny Filoha teo aloha ity ?
Ady amin’ny pesta Hisy ny fanadiovana faobe manerana an’i Madagasikara
Nifantoka tamin’ny ady atao amin’ny valanaretina pesta ny fandaharana “fotoam-bita” fanaon’ny filoham-pirenena isan-kerinandro hanazavany ny tara ho fantatra mikasika ny raharaham-pirenena ankehitriny.
Sakafo ara-pahasalamana Hanaovana adihevitra ny 17 sy ny 18 novambra
Toy ny fanaony isan-taona dia hanamarika ny andro iraisam-pirenena momba ny sakafo ara-pahasalamana sy azo antoka ny sampandraharaha iray misahana izany eo anivon’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka ny 17 sy ny 18 novambra ho avy izao.
Vakinankaratra Orinasa 5 tsy manana “permis environnemental” kanefa miasa
Mazava ny tatitra an-taratasy nataon’ny sampandraharaham-paritry ny tontolo iainana sy ny ala Vakinankaratra taorian’ny fivoriana natao ny alakamisy teo fa misy orinasa 5 tsy mbola manana ny fahazoan-dalana amin’ny fanajana ny tontolo iainana na permis environnemental any an-toerana.
Mpizahatany tonga eto Madagasikara Nihena 15 % noho ny pesta
Nihena 10 ka hatramin’ny 15 % ireo mpizahatany tonga nitsidika antsika teto Madagasikara hatramin’ny nisian’ny pesta, hoy ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ny ofisim-pirenena momba ny fizahantany na ny ONTM.